Tobanka diyaaradaha dagaalka ee ugu khatarsan adduunka (sawirro) – Radio Daljir
Tobanka diyaaradaha dagaalka ee ugu khatarsan adduunka (sawirro)
Oktoobar 1, 2018 2:12 g 0
Qiimeynta khataraha tobankaan diyaaradood waxaa lagu saleeyey isugeynta dhibco ay kamidyihiin in uu raadaarku arki karo diyaaradda, hubka ay isticmaasho, xawaaraha ay ku duusho, inta ay hawada ku jiri karto, iyo dhakhsaha ay ku leexan karto.
Hoos kaga bogo masawirka iyo magaca diyaaradda iyo dalka sameeya.
(1) Lockheed Martin / Boeing F-22 Raptor (USA)
F-22 Raptor raadaarku ma arko, waxa ayna ku dagaal gashaa hub kan ugu khatarsan. Diyaaraddaan war badan lagama hayo maxaa yeelay warkeeda oo dhan waa sir. Diyaaraddaan oo la yiri waa tan adduunka ugu khatarsan, uguna casrisan xataa looma oggola NATO.
Maqaalo Kale 398 Wararka 24316
Maxaa ka jira in Madaxwayne Gaas amray joojinta mashruuca jidka Garoowe-Gaalkacyo? (dhegayso)